Blender 2.92, kutanga kwechimwe chinhu chinoshamisa maererano nevakagadziri | Linux Vakapindwa muropa
Blender 2.92 yasvika uye vagadziri vayo vanovimbisa kuti ndiko kutanga kwechinhu chinoshamisa
Mwedzi mitatu mushure vhezheni yapfuura, isu tatova nechikamu chitsva cheiyi inozivikanwa 3D yekugadzirisa mifananidzo uye modelling software. Ndezve Blender 2.92uye asvika nematurusi matsva uye nemanzwiro evhavha: zvinoita sekunge vagadziri ava havasi kupererwa nemazano uye vanogara vaine chimwe chinhu chinonakidza kuwedzera kune iyi software iyo, kunyangwe chiri chokwadi kuti haazi munhu wese anogona kugona, zvakare zvakakosha yevashandisi vane ruzivo.
Zvakajairika kuti kana mumwe munhu aburitsa vhezheni itsva yesoftware yavo vanoti ndiyo yakanyanya kunaka yavakaita kusvika parizvino, chimwe chinhu chine musoro zvakare kana tichifunga kuti ndicho chazvino chavakagadzira. Asi iwo eaya akakurumbira edhita / modeler anovimbisa kuti Blender 2.92 inoratidza kutanga kwechinhu chinoshamisa. Pazasi iwe une runyorwa rweakanyanya kushambadza nhau dzakasvika neiyi vhezheni.
Pfungwa dzeBlender 2.92
Node mu geometry, ine modifier nyowani inogona kugadziridzwa uye nekuparadzira mapoinzi.
Mass zvivezwa, pamwe nemukana wekudzora siluetti chero nguva uye nyowani "yakasununguka nyoka" maitiro.
Peni kurohwa kunogona kugadziridzwa kunge makakombama.
Mikana yekutsvaga kufamba.
Mabhrashi mazhinji ave manyoro.
Kugona kugadzira primitives mukati nekungobaya maviri chete.
Kunatsiridzwa munaEevee, uye mune yekuburitsa noti (inowanikwa pakutanga kwechinyorwa chino) tinogona kuona zvimwe zvinokwezva zvekufananidza, zvekuti zvinogona kuti ndosaka ivo vanogadzira vachiti iko kusunungurwa ndiko kutanga kwechinhu chinoshamisa.
Nzvimbo nyowani yekuburitsa node mumunyori kuti uone zvese.
Dzimwe gadziridzo dzese.
Blender 2.92 ikozvino yave kuwanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu kubva Iyi link. Vashandisi veLinux vanogona zvakare kuisa yako snap package uye iyo flatpak package.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Blender 2.92 yasvika uye vagadziri vayo vanovimbisa kuti ndiko kutanga kwechinhu chinoshamisa
WINE 6.3 inosvika isina makuru nhau, asi mazhinji akadzika-epasi zvigamba
Firefox 86 inouya neKuki Cookie Kudzivirirwa, Mufananidzo-mu-Mufananidzo zvinowedzera uye nezvimwe